Noocyada bilaashka ah ee bisha Sebtember
Fariimaha gebi ahaanba bilaashka ah si aad ugu raaxeysato shaqadaada. Waxay ka farxin doontaa dhammaan noocyada akhristayaasha, marka waa inaysan ka maqnaan maktabaddaada.
In kasta oo ay jiraan qalab badan oo kale oo lagu soo qaado midabka loo doortay mashruuceena, waxaan u maleynayaa in qalabkan aan halkaan dhignay ay yihiin kuwa ugu fiican.
Maxay u sameysaa warbixin kooban oo is-dhexgal ah oo fudud, cad oo dareen leh?
Waa sidee warbixinta kooban ee aad inta badan u dirto macaamiishaada? Weligaa miyaad ka fikirtay ku habboonaynta ka hor intaadan bilaabin rarka?
"Letterpress" waxay ka kooban tahay magacaabista Ingiriisiga oo u janjeera in loo tarjumo "warqad cadaadis".
Si loo nooleeyo sawir wareegsan looma baahna in la sameeyo wax soo saar waqti badan qaadanaya, way ka fududdahay sida muuqata
La kulan 5 nooc oo cusub oo aysan aheyn in laga waayo maktabaddaada
Noocyada cusub waxay qiime weyn siin doonaan mashaariicdaada naqshadeynta taasna waa inaysan ku dhex maqnaan maktabaddaadu waxay noqon doontaa waxyaabaha soo socda, haddaba fiiro gaar ah u yeelo.
Isku duwidda gelitaanka bilaashka ah ee waxtarka leh wixii ka dambeeya Raadka. Waxaan sidoo kale ku siineynaa degello internet si aad u soo degsato intros wax lagu beddeli karo iyo tifaftireyaasha fiidiyowga si aad adigu u abuurto
Ilaha aan ka xusayno gudahooda, waxaad awoodi doontaa inaad hesho dhowr qaab, tusaale ahaan: xarrago, Masaari, qosol, iwm, ee ku raaxeyso.
Wejigu wuxuu maareeyaa inuu helo boosas badan oo ka mid ah naqshadeynta, waa sababta maqaalkan uga hadli doonno, si aan kuugu fududeyno.
6 qalab midab muhiim u ah naqshadeeyayaasha
Waxaa jira aalado badan oo internetka ah oo internetka ah oo mararka qaar aanan garanayn midka aan adeegsanayno, sax? Marka indhaha ha ka jeedin qodobkan, wuu kula yaabi doonaa.
Uruurinta maanta kheyraadka waxaan awoodi doonnaa inaan aragno dhowr maktabadood oo sawirro PNG ah oo hufan oo bilaash ah.
50 Faahfaahin qaab-naqshad bilaash ah. Jaangoynta buugaagta, joornaalada, buug-yaraha iyo kaararka. Ku soo dejiso sheybaaradaan Adobe InDesign bilaash
Mupi Mockup iyo xayeysiinta banaanka lagu xayeysiinayo
Isku-darka 30 xayeysiinta bannaanka ah ee bilaashka ah iyo mupi mockup oo ah qaab sawir-qaade ah oo diyaar u ah in la soo dejiyo si loo badbaadiyo waqti badan shaqadaada
Sida loo sameeyo shaashad shaashad ama gidaar leh sawirro Instagram ah?
Hal dariiqo oo aan ku xusi karno si aan ugu siino adeeggan asalka ah sawirradaada Instagram waa adoo u adeegsanaya fikradaha hal-abuurka leh shakhsiyad badan.
30 sano ee GIF ugu horeysay, yaa oran lahaa
Sawiradan isdaba jooga ah ee soo noqnoqda ee wareegga loo yaqaan waxaa loo yaqaan 'GIF' waxaana sanadkan 2017 uu calaamadeynayaa 30 sano tan iyo markii uu soo muuqday.
Abuur astaamo bilaash ah
Haddii aad u baahan tahay inaad sameysatid astaamo bilaash ah degel, youtube ama blog oo aadan aqoon sida, halkan waxaan ku tusi doonaa degello internet ah oo aad ku abuuri karto astaamo bilaash ah.
Fiiri isbeddellada farta cusub ee mustaqbalka
Tani waa xilli wanaagsan oo dib loo eegi karo waxa noqon doona isbeddellada qaabeyn doona mustaqbalka qorista naqshadeynta, haddaba ha seegin maqaalkan.
Qalab weyn oo khadka tooska ah lagu sameeyo Pixel Art
Shabakadda waxaa jira barnaamijyo badan oo ka shaqeeya noocan farshaxanka garaafka ah qodobkan waxaannu ku tusi doonaa qaar ka mid ah aaladaha internetka ee lagu sameeyo farshaxanka pixel.
Soo degso mid ka mid ah 31 casuumaadaha dhalashada asalka ah ee aad jeclaan doonto laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa ee ay martida gaarto. Waa bilaash!
47 naqshadaha bilaashka ah ee qaabab kasta oo suurtagal ah
47 tatuubo tusaalooyin ah oo aad u adeegsan karto naqshad u sameynta sawirkaaga xiga ama ilaha dhiirrigelinta si loo baro istuudiyaha tattoo.
35 silhouettes tayo sare leh oo bilaash ah oo dadka ah
Shaashadda bilaashka ah ee dadka nooc kasta leh si loo qurxiyo waxay u shaqeysaa dhammaan noocyada macaamiisha ama mashaariicda aad ugu baahan tahay inaad ku isticmaasho silhouettes.
Bilaabidda nooca Isbaanishka ee tifaftiraha garaafyada ee Canva
Canva waa codsi online ah oo loo isticmaalo naqshadeynta garaafka, taas oo caan ku noqotay in ka badan 10 milyan oo qof oo adeegsada.
PixTeller waa barnaamij xoogaa ka duwan, waa codsi u shaqeeya istiraatiijiyad istiraatiiji ah oo dhakhso leh oo sawirro ah.
Liiska codsiyada khadka tooska ah ee internetka ayaa kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho sawirada qaybo badan, oo loo soo bandhigo sida soo socota:
Mawduucyada HTML5 ee jawaabta leh
Ma waxaad raadineysaa arrimo HTML5 oo jawaabaya? Soo dejiso 20-kan shebekadood ee gebi ahaanba bilaashka laga dhigi karo oo lagu qoray HTML5 iyo CSS3. Hel dhammaantood!
Sidan ayaa Rinji ugu soo ifbaxay taariikhda Windows
Kuwo badan ayaa noqon lahaa wararka xanta ah ee ku saabsan codsiyada cusub ee Windows 10, iyo sidoo kale ka saarista suurtagalka ah ee Rinjiga caanka ah.
60 nooc oo gacanta lagu sameeyo
Ma waxaad raadineysaa far qoraal gacmeed? Ha seegin ururintayada 60 font gacanta lagu qoro oo si dabiici ah u ekeysiinaya qoraalka gacanta lagu qoray.
Soo dejiso 25 noocyada far-qorista ee qadiimiga ah oo si gaar ah loogu talagalay naqshadeynta farshaxanka oo u adeegso naqshadahaaga iyo qoristaada, waa bilaash.
Sawiradu waxay u adeegaan calaamadaha, si ay uga sheekeeyaan sheekadooda una gudbiyaan farriin.
Doorka wargeysku waa muhiim inuu runtii soo jiito dareenka waxa soo ifbaxay maalmihii la soo dhaafay ama si ay u ogaadaan astaantaada.
Sanduuqa iyo jees jeeska
Soo dejiso mid ka mid ah 34-kan sanduuqa furan ee furan iyo jees jees si loo abuuro baakado asal ah oo aad u hal abuur leh.
Buug-yaraha khadka tooska ah, 30 tusaalooyin buug-yare oo bilaash ah
Ma waxaad ka raadineysaa gawaarida qadka tooska ah? Ku soo dejiso 30-kan buug-yaraha bilaashka ah iyo waraaqaha xaashida qaab-dhismeedka PSD ee loogu talagalay Photoshop.
3 sababood oo sawirku ugu qiimeeyo kun eray naqshad
Qofkasta oo yidhi "sawirku wuxuu u qalmaa kun eray" wuu saxsanaa oo waa in ereyadan ay intan aad ugu habboonyihiin internetka.
Foomamka xiriirku waxay caddeeyeen inay yihiin hab aad u wanaagsan, maadaama qalabkani yahay mid ka mid ah hababka ugu fudud aragga.
7 kheyraad naqshadeynta garaafka ah si mashruucaaga looga dhigo mid hal abuur leh
Fikradda fasalkan kheyraadku waxay ka jawaab celineysaa suurtagalnimada inaad ku siiso shaqadaada muuqaal xirfad leh oo qurux badan dhammaan macaamiisha.
Isticmaalka naqshadaha websaydhku waa isbeddel, taas oo lama huraan ah in ay sii kordheyso sumcaddeeda maadaama ay maalmaha sii socdaan, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Raadinta casumaadaha arooska BILAASH? Ha moogaanin uruurintaan aroosyada iyo dabaaldegyada casuumaadda vectors-ka iyo astaamaha.
Kheyraadka noocan ah waxay si cad ugu xirnaan doonaan nooca shaqada la qabanayo, iyo sidoo kale waqtiga, macnaha guud iyo nooca shirkadda ama macmiilka.
Astaamaha Webka: Naqshadeynta iyo Talooyinka Isticmaalka
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa talooyin ku saabsan qaabeynta iyo adeegsiga astaamaha naqshadahaaga, oo leh qaab joomatari ah oo ka dhigaya astaamahan goobahan ilaha ugu weyn.
Maxaa ku cusub Fonts Google: Hadda waxaad isku dari kartaa noocyada waraaqahaaga!
Isbeddel cusub ayaa yimid oo waa in wax lagu qoro noocyo kala duwan oo xarfaha ah iyo Google Fonts, inaad la socoto taariikhda waa waxa ugu muhiimsan.
Shan Fonts oo kala duwan oo Google ah iyo waxa adeegsadayaashoodu ka leeyihiin qoraalka
Isku soo wada duuboo howshaan ayaan kuu qabaneynaa waxaanan ku soo bandhigeynaa xarfahayaga 5-ka ah ee ugu caansan Google Fonts, ku faraxsanow inaad ogaato haddii aan kugu raacno
Isku dhafan midab kala duwan oo leh giraanta chromatic
Marka loo eego taariikhda shineemooyinka, waayo-aragnimada laga helay shaashadda weyn waa weyn tahay taasna waxay tahay in midabku uu si fiican u waafajinayo xaqiiqda.
Sannadkan waxaan haynaa isbeddel cusub oo naqshadeyn ah oo loo yaqaan 'sare u qaadista' kaas oo maareeya in la abuuro saameyn saddex-geesood ah jaleecada hore.
Waa muunad horudhac ah oo uu sameeyay naqshadeeyaha garaafka, iyada oo loo marayo sawir qaadis iyo cabir si loo tuso macmiil sida ay naqshadoodu noqon doonto.
Astaantu waa shaabad lagu kala garto hal shirkad iyo shirkad kale, waa tan lagu aqoonsado adeegga la bixiyo ama sheyga la iibinayo
Tilmaamaha qaabku waa wax aan ka badnayn soo koobid macluumaad ah oo ku saabsan dhammaan walxaha sameeya astaan ​​u adeegta aalad ahaan.
Warbixintu waa farshaxan asaasi u ah naqshadaynta iyo cusboonaysiinta aqoonsiga shirkadeed ee shirkadeed, markaa muhiimadda ay leedahay codsigeedu.
Weligaa ma ka fikirtay sawirka shirkaddaada iyo waxa aad ku isticmaasho shabakadaha? Weligaa ma isweydiisay inay sax tahay iyo in kale? Ogow.
Futuracha Pro, nooc asal ah oo isbeddelaya markaad qorto
Futuracha waa: ilo ka mid ah nooc qurxin leh farshaxan-qurxin madxaf aan la filaynin: baranbarada Kariibiyaanka.
Abuureyaasha astaanta ugu fiican internetka
Soo ogow waa kuwee websaydhada ugu fiican ee leh astaan ​​sameeye si loo abuuro astaamo loo adeegsan karo ganacsiyada yaryar, shaqooyinka, bogagga internetka ama barnaamijyada
29-ka bog ee ugufiican ee lagu helo vektor lacag la'aan ah
29 degel si loo soo dejiyo dulinka bilaashka ah shaqooyinkaaga internetka ama mashaariicda xirfadeed. Noocyo badan oo iyaga ka mid ah si aad u soo dejiso midka aad u baahan tahay.
Khariidadaha wax lagu qoro waxaa laga dhex helay nashqadeynta garaafka waana inaad ogaataa
Calligraphy waxaa loo tixgeliyaa fikrad ka badan farshaxanka, waxay u egtahay in midkeen kastaaba uu nafteenna ku matalay qoraalkeenna.
Iska ilow helitaanka qaabeynta qaabdhismeedka 3B: Wanaagsan, Qurux badan oo Jaban
Iska ilow raadinta 3B qaabeynta qaabdhismeedka: Wanaagsan, Fiican oo Fiican, maxaa yeelay cidina si adag kuma siinayso pesetas-ka haddii aad tayo u baahatana waad bixinaysaa.
Mabaadi'da aasaasiga ah si ay u sameeyaan xubno graphic gebi ahaanba wax ku ool ah
Markaad samaynaysid shey kasta oo xayeysiin ah waxaa muhiim ah inaad siiso feejignaanta lagama maarmaanka u ah canaasiirta sameysa, marka fiiro gaar ah u yeelo.
Marka la fulinayo mashruuc naqshadeynta garaafka ah, fikradda macmiilka, nooca shirkadda, ujeeddooyinka iyo dhammaan faahfaahinta waa inay noqdaan kuwo cad.
Sidee si sax ah loogu daraa noocyada kala duwan ee naqshadeynta garaafka?
Immisa nooc ayaa ku habboon shaqada? Sida caadiga ah, in ka badan seddex nooc ayaa noqon doona mid xad dhaaf ah, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Abuur burushyo Photoshop ah
Abuur buraashyo Photoshop adiga kuu gaar ah oo siiso mashaariicdaada garaafka taabasho shaqsiyeed. Samee buuggaaga cadaygaaga.
17 Bangiyada Sawirka Bilaa-boqornimada leh
Qaar badan oo ka mid ah dadka ka shaqeeya nashqadaha iyo curinta ku saleysan sawirrada sawirrada leh ayaa shabakadda ka raadsada sawirro ...
Waa maxay DPI? Waa maxay macnaha PPI? Waa maxay xallin?
DPI iyo PPI waa xubno muhiim u ah in laga ogaado adduunka naqshadeynta garaafka waana inay ku xirnaadaan xallinta sawirka.
Abuur burushkaaga Photoshop oo ku diyaari maktabadaada
Burushku wuxuu metelaa mid ka mid ah walxaha aasaasiga u ah kartoonistayaasha si ay u gutaan shaqadooda tusaalaha leh aaladda Photoshop.
Waa saynis u saamaxaya daraasadaha gorfaynta, sida saamaynta, midabada, dhaqanka iyo aragtida aadamaha.
Muuqaal muuqaal ah: Fariinta ka hor quruxda
Qoraalkan waxaan uga hadli doonnaa macnaha ahmiyadda laga siinayo farriinta quruxda, sida sawirrada dhiirrigelinta leh.
Burushyadani waxay muujinayaan qayb weyn oo ka mid ah waxyaabihii u ahaa xilligii dib u dhaca inay qayb ka ahaayeen dhaqanka laftiisa, soo hel!
Sida loo siiyo sawirradaada saamaynta Instagram
Sii sawirradaada iyo barnaamijyada naqshadeynta bilaashka ah ee kala duwan, taas oo ah saamaynta Instagram ee qof walba ka hadlo.
Tixraacyada abuurka mashruuc garaaf ah
Tixraacyo si loo abuuro mashruuc farshaxan hal abuur leh oo adduunka loo muujiyo awoodeena sida abuureyaasha garaafka. Ka faa'iidayso hal-abuurkaaga.
Isbeddellada hadda jira ee qaabeynta garaafka
Kuwani waa qaar ka mid ah isbeddellada hadda jira ee ku jira naqshadeynta garaafka, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Waa maxay Sheeko Sheeko iyo sida loogu noolaado iyada oo loo marayo Infographics
Sheeko-qoristu waxay ka kooban tahay farsamo loo adeegsado in loogu sheego sheekooyinka qaab qof walba u fahmi karo una fahmi karo farriinta astaanta.
Mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee xirfadle kasta oo suuq geynaya ama naqshadeeye garaaf ah ay tahay inuu qabto waa inuu ogaado sida midabka loo isticmaalo.
Kheyraadka iyo Qalabyada lagu horumarinayo sawirada
Sameynta sawir-qaadashadu waxay noqon kartaa waxoogaa dhib badan, sidaa darteed waxaan ka hadli doonnaa xoogaa ilo ah oo kaa caawin kara inaad dhiirrigeliso.
Naqshad kheyraad bilaash ah, bangiyada sawirka iyo astaamaha
Ku soo degsashada sawirrada bilaashka ah, astaamaha iyo sawirrada xallinta sare, badanaa waa ikhtiyaarka ay naqshadeeyayaal badani doortaan.
Soo dejiso oo isticmaal burush si aad qiiq ugu abuurto Photoshop
Soo degsashada iyo adeegsiga buraashka si aad qiiq ugu dhex abuurto Photoshop waa xulafaysi awood badan u leh hal-abuur kasta. Burushka Photoshop waxay bixiyaan xaqiiqo weyn.
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato "buugga aqoonsiga shirkadaha"
Buug-gacmeedka sawir-gacmeedka shirkadeed waa dukumiinti ay ku jiraan sharciyada mid kasta oo ka mid ah qaybaha garaafka.
Siddeed Kheyraad Cajiib ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Sawirka iyo Naqshadeeyayaasha Webka
Haddii aad tahay jaantus ama naqshadeeye websaydh, waa inaad ogaataa inay jiraan ilo kala duwan oo dhawaanahan gebi ahaanba bilaash u ah inay soo dejiyaan.
Maxay yihiin su'aalaha la weydiinayo macaamiisha ka hor intaadan bilaabin naqshadeynta astaanteeda?
Kahor intaadan bilaabin fulinta mashruuc kasta oo ku lug leh naqshadeynta, waxaa lagama maarmaan ah in macluumaad ku filan oo hordhac ah laga helo macaamiisha.
Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa qalab kaa caawin doona inaad aqoonsatid noocyada ay leeyihiin sawirada si loo ogaado nooca uu adeegsanayo.
Dhamaanteen wax yar ka og naqshadeynta waan ognahay in aynaan u adeegsan wax ka badan seddex nooc xarfaha dhexdeeda, haddii kale waxay umuuqataa mid aad u culus.
Ahmiyada ay leedahay abuuritaanka magac wanagsan ee sumad ama shey ayaa farqiga udhaxeyn kara guusha ama guuldarada mashruuceena.
Taariikhda astaanta Apple waxay leedahay jajabyo maqaalka maanta waxaad awood u yeelan doontaa inaad ogaato sida astaantu u ahayd bilowgeeda iyo isbeddelkeeda.
Muxuu ahaa qiimaha astaamaha ugu caansan
Wax ka baro astaanta ugu qaalisan adduunka, illaa astaamaha ugu jaban ee shirkadaha iyo asalka kuwan.
Sida loo qaabeeyo astaan ​​wanaagsan, astaamo aasaasi ah
Astaamaha si wanaagsan loo qaabeeyey waa mid qiime u siiya shirkadaha, maadaama ay ka tarjumeyso qiyamka iyo falsafada kuwan hortooda macaamiishooda.
Sirta ka dambeysa guusha nooca 'Helvetica typeface'
Helvetica waxay ka kooban tahay nooc nooc gebi ahaanba hal abuur ah oo asal ahaan ka soo jeeda asal ahaan, kaas oo ku guuleystay inuu abuuro luqad casri ah iyo mid hada taagan.
Comic Sans wuxuu noqday mid ka mid ah astaamaha loogu neceb yahay adduunka naqshadeynta garaafka, maadaama ay tahay far carruureed.
Saddex xarfo oo dhaadheer oo raadinta ah
Taasina waa raadinta, oo sidoo kale loo yaqaan 'systeming signaling system', oo ah ujeedkeeda ugu weyn inay ka caawiso horumarinta nidaamyada hagidda wanaagsan
Daabacaadda 'Offset' waa qaab lagu soo saaro dukumiintiyo iyo sawirro ku qoran warqad, ama waxyaabo la mid ah, lagu ogaado sida ay u shaqeyso.
Naqshadeynta garaafka waxaa aad muhiim u ah in la ogaado shuruudaha kala duwan ee qoraalka, maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa shaqada mid aad u fudud.
Midabbo guduud, violet iyo lilac adduunka naqshadeynta ah
Adduunyada waxaa jira kumanaan midabo oo isbeddelaya iyadoo loo eegayo cufnaanta, iftiinka iyo nooca midabka, ogaada macnahooda markaad la shaqeyneyso.
Bogagga Waxyoobista Nooca Waxaad U Baahan Doontaa Intaad Ku Jirto Xirfadda Naqshadeynta Sawirka
Qodobkaan, waxaad ku ogaan doontaa qaar ka mid ah bogagga ugu fiican ee dhiirrigelinta qoraallada ee aad u baahan doonto inta lagu jiro xirfaddaada qaabeynta qaabdhismeedka.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xuruufta iyo vinyl-yada
Maqaalka maanta waxaan uga hadlaynaa calaamadeynta iyo vinyl-yada, wax muhiim u ah naqshadeeye naqshadeysan oo doonaya inuu la socdo.
Sida loo adeegsado farta lagu akhristo
Shaqadaada waxaad ubaahantahay wax kabadan naqshad wanaagsan ama qoraal wanaagsan si aad dadka uhesho, waana sababtaas sababta xarfaha ay aad muhiim ugu yihiin.
Haddii aad tahay naqshadeeye, way ku anfacayaan inay bartaan isticmaalka iyo adeegsiga sawirada vektorka si loogu isticmaalo nolol maalmeedkaaga iyo mashruucaaga.
Midabka dhabta ah ama Pantone? Ogow kala duwanaanshaha
Midabada kala duwan ee Pantone waa midabbo dhab ah oo caawiya naqshadeeye kasta oo naqshadeeya marka la sameynayo mashruuc, astaan ​​ama astaan.
Astaamaha - Astaamaha, mashiinka raadinta astaanta
Icons-Icons waa mashiin raadinta astaamaha ah oo aad ka heli karto wax ka badan 60 icons si bilaash ah iyo waqti xaddidan.
Ryman: Mashiinka Mashiinka Cagaaran ee Dunida
Iyada oo nooca Ryman ah aad ku keydin doontid illaa 33% khad ah mashaariicdaada garaafka ah. Ka taxaddar meeraha adoo adeegsanaya nooca qaab-dhismeedka deegaanka.
Soo hel in ka badan 2500 ilo lacag la'aan ah
Soo hel in ka badan 2500 ilo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha barxad kasta sida sawir-qaade ama sawir-qaade oo hel boqortooyo naqshadeysan.
Burush Photoshop Bilaash ah
10 burush Photoshop oo bilaash ah, miyaadan wali soodajin? Waad ku farxi doontaa inaad ogaatid inaad haysatid markii ay shaqo codsadaan. Gali oo soo ogow waxay ku saabsan tahay
Baro sameynta jees jees leh astaantaada
Waxaan ku baraynaa inaad ku isticmaasho jeesjees sumaddaada. Waxaad heli doontaa natiijooyin aad u soo jiidasho leh waxaadna awoodi doontaa inaad aragto haddii astaan ​​shaqeyneyso ama aysan ku jirin dhexdhexaad gaar ah.
Qaar ka mid ah jeesjeesyada waxtarka leh si loo siiyo hal-abuurnimo badan naqshadahaaga
Mockups-ka ayaa noo oggolaanaya inaan wax yar ka fikirno sida astaanta ama naqshaddu u ekaan doonto oo loogu talagalay in lagu dhejiyo nashqadahayaga.
Bilaash iyo noocyo kala duwan oo nooc ah
Isticmaalka noocyadan farta ah ee bilaashka ah ayaa ka dhigaya shaqooyinkaaga iyo mashaariicdaada inay joojiyaan caajiska waxayna gabi ahaanba ka duwanaan doonaan waxa maanta jira.
Bangiyada sawirada: saaxiibka ugu fiican ee naqshadeeyaha
Bangiyada sawirku waa ikhtiyaar aad u fiican marka sawirrada iyo waxyaabaha garaafka ah loo baahan yahay in lagu sameeyo nooc kasta oo mashruuc ah.
7 xeerar fudud oo moobilka lagu qoro
Toddobo tilmaam oo fudud si aad ugu hagaajin karto qoraalkaaga qalabka moobiilka isla markaana isla markaa aad u hagaajin karto qaabeyntiisa.
Sida loogu guuleysto isku dhafka font
Isku darida xarfaha ayaa ah wax hagaajin kara naqshadeyntaada, laakiin waxay noqon kartaa geedi socod adag in la doorto noocyada noocyada kala duwan ee si fiican u socda, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Sida loo xusho farta la heli karo
Muhiimadda xarfaha loo isticmaalo marka la sameynayo mashruuc ama websaydhkaaga waa mid aad muhiim u ah, maadaama tani wax walba booli karto
"Ii sheeg sidaad tahay oo magacaaga ayaan kuu sheegayaa." Logos?
Waxaan u nugul nahay inaan kala hadalno qaab qaldan markaan ka hadlayno sumad, ma jeceshahay inaad joojiso oo aad barato ereyada loo adeegsado qaabeynta?
Qoraalku waa xulafaysi awood badan markay tahay gudbinta farriimaha, barashada sida saxda ah ee loo isticmaalo waa shuruud aasaasi ah oo si sax ah loo qaabeeyo.
Scketchfab, wadaag qaababkaaga 3D
Ma waxaad tahay farshaxan 3d ah oo waxaad dooneysaa inaad yeelato faylalka qoraalka oo aad ku tusi karto moodooyinkaaga 3d iyo martida wareegi karta? Qodobkaani adiga ayuu ku xiiseeyaa
Ku hel qaabkan cajiibka ah ee astaamaha moodada si bilaash ah
Haddii aad raadineysid xirmooyin tayo sare leh oo laxiriira adduunka moodada, midka aan kugu siino bilaash waa qumman yahay.
Waxyaabaha ugu fiican ee lagu dhiso boggaaga WordPress
Waxyaabaha ugu fiican ee ay tahay inaad tixgeliso markaad dhiseyso boggaaga ama blog-kaaga Wordpress. Baro iyaga.
Astaanta caanka ah ee caanka ah 'Star Wars' ayaa midab casaan ah ugu beddelaysa 'The Last Jedi'
Shaley Disney teaser, astaanta caanka ah ee Star Wars hada waxaa lagu xardhay casaan taasoo layaab ku noqotay dhamaan taageerayaasha taxanaha ah.
Waxoogaa ilo ah oo loogu talagalay sawir-qaadaha gebi ahaanba waa bilaash
Waxyaabo yar oo gebi ahaanba bilaash ah oo sawir-qaade ah oo aad uga faa'iideysan karto inaad abuurto naqshado badan oo aad u kala duwan oo asal ah.
Baro Adobe Add-ons: Maktabadda Kheyraadka
Baro Adobe Add-ons: Maktabadda ugu weyn uguna runta badan ee Adobe ayaa diyaar u ah dadka isticmaala adiga oo kale si bilaash ah.
Mozilla waxay soosaartay astaan ​​cusub
Mozilla ayaa maanta soo saartay astaan ​​cusub oo ay ku muujineyso fikradeeda ku saabsan waxa uu Internetku noqonayo, goob caafimaad oo lagu dareemo xor.
Qaboojiyahayaashu waa aalad shabakad awood u leh inay si toos ah oo aan kala sooc lahayn u soo saarta midabbo midab leh iyada oo aan doollar dusha laga saarin
Raaxo si aad u horumariso hal-abuurka farshaxanka kugu dhex jira. Alaabta guriga, sahayda, agabyada iyo waxyaabo kale oo badan si aanad waxba uga maqnaan shaqadaada.
Ku saabsan Wloks
Ku saabsan Wloks. Haddii aad rabto inaad haysato ilo muuqaal ah si aad ugubilaacdo safarkaaga ganacsiga adduunka, Wloks ayaa kaa caawin kara.
Stockunlimited waxay isticmaashaa qaab isku mid ah sida Netflix, Spotify iyo kuwa kale oo fara badan, si ay u bixiyaan soo degsasho aan xadidnayn oo muuqaallo ah, sawirro iyo waxyaabo kaloo badan
Datalegreya waa font bilaash ah oo cabsi leh khadad jaantus ah
Haddii aad raadineyso font bilaash ah oo xarrago leh oo muujineysa garaafyo iyo qiimayaal khadad isku mar ah, Datalegreya waa waajib in la rakibo.
Baakad dulinka lacag la’aan ah si aad ugu qurxiso Kirismaskaaga xilliga Kirismaska
Dhamaanteen Kirismaska, waxaan jecelnahay inaan helno oo aan dirno Kirismaska. Waxaan ku siineynaa ilaha sawirada bilaashka ah ee Kirismaskaaga.
Calaamaduhu dib ma u noqdaan?
Waxaa jira isbeddel in dib loogu laabto dib u noqoshada maaddaama noocyada waaweyn ay ka soo kabanayaan naqshadoodii hore si ay uga soo kabtaan qiimaha khibradda
Afar Qoys oo Icon Bilaash ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho astaamo gebi ahaanba bilaash ah oo mawduucyo kala duwan leh, oo leh naqshad casri ah iyo joomatari, aad waxtar ugu leh amarradaada.
Xarfaha guridda ee xarfaha
Qoraalkan waxaan ka heli karnaa xulasho xarfaha alwaaxa guridda ah, haddii aad jeceshahay xuruufta ama aad kaliya raadineyso waxyi, kani waa boostadaada
36 astaamo bannaan oo bilaash ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho astaamo tayo sare leh oo loogu talagalay naqshadahaaga, oo leh qaab joomatari ah oo ka dhigaya astaamahan baaxadda leh ilo aad u fiican.
Kani waa astaanta cusub ee Taco Bell
Tani waa astaanta cusub ee Taco Bell si ay ula socoto dhagaystayaasha da 'yarta ah iyo waxa u noqon lahaa da'da dhijitaalka ah ee silsilad caan ah oo caan ah
Fonooyin Bilaash ah oo loogu talagalay Naqshadayaasha
Maanta waxaan kuu keenaynaa xulashada noocyada bilaashka ah ee noocyada badan loo adeegsado, dhammaantood waxay leeyihiin tayo aad u wanaagsan iyo iswaafajin, taas oo ka dhigaysa mid iyaga u gaar ah.
Sida loo abuuro qaab muujiye
Casharradan fudud waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo qaab tayo leh oo Muujiye ah tillaabooyin yar oo fudud, waxay noo oggolaan doontaa inaan qaab u siino naqshadeena
Mawduucyada bandhigyadaada ku saabsan Mac
Mawduucyada abuurka bandhigyada. Abuur bandhigyadaada oo leh Bogag, Muhiimad iyo Nambarro si aad qof walba u qanciso, maxaad u malaynaysaa?
Jees jees lacag la'aan ah
Waxaan kuu soo qaadaneynaa xulitaankan jeesjeesyada kala duwan ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha cuntada, bilaashka ah, tayada leh oo si fudud wax looga beddeli karo sawir-qaadaha.
Sawirro Muuqaal Bilaash ah oo Iceland ah
Waxaan soo qaadaneynaa xulkan soddon sawir oo muuqaallo kala duwan oo Iceland ah, gabi ahaanba bilaash ah in lagu isticmaalo boggaaga, balooggaaga ama naqshadahaaga.
Nadiifinta biyo-biyoodka bilaashka ah ee naqshadahaaga
Xulashada laba iyo toban wasakh tayo sare leh oo biyo-biyood leh oo siin doona naqshadahaaga iyo sawiradaada xirfad-yaqaan, firfircoon iyo muuqaal casri ah.
Astaamo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaabka qaabeynta qaabdhismeedka:
Iyada oo tan oo gabi ahaanba bilaash ah oo wax laga beddeli karo naqshadeynta qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka, waxaad ka dhigi doontaa naqshadahaagu inay qaataan tayo xirfadeed.
Sidee loo ogaadaa inta megabyte sawirada degelku culeyskoodu yahay
Haddii aad isticmaasho Evernote oo aad rabto inaad gebi ahaanba kaydiso degel si aad uga heli karto barnaamijkan, waxaan ku bari doonnaa inaad ogaato inta miisaankeedu yahay sawirrada
Pandora waa adeeg muusig oo qulqulaya oo casriyeeyay astaantiisa maanta si uu u matalo fikradaha iyo dareenka kale.
Astaamaha animated si loo soo dejiyo, ayaa laga dhigay 100% ka dib Raadka, lagu daray iyo ciyaar, waxna laga beddeli karo muddada iyo midabada, muuqaal qurux badan oo wax ku ool ah
Halloween wuu soo dhawaanayaa waana inaad haysataa xaashiyahaas ama waraaqahaas loo diyaariyo xafladaha soo socda oo habeenki iyo argagax kugu sugayso
5 goobood oo ugu sareeya si loo abuuro faylalkaaga
Kuwani 5 goobood waa kuwa ugu fiican ee aad ka heli karto si aad u abuurto faylalkaaga internetka. Waxaa ka mid ah Behance, oo caan ku ah booqashooyinkeeda malaayiin
Naqshad Template: Ka dib Saamaynta fiidiyowyada fiidiyowga ah
Template Monster 30.000 oo sheybareedyo ah: Wordpress, HTML, Magento, Joomla, PrestaShop, Drupal, Shopify, sheybaarada Power Point iyo Kadib Saamaynta fiidiyowyada
10 nooc oo Retro ah oo bilaash ah oo ay tahay inaad ogaato haa ama haa
Haddii aad raadineyso font retin vintage font tayo sare leh oo bilaash ah oo gaar ah, mid ka mid ah 10 kan ayaa kugu habboon adiga.
QORAALKA FARSAMADA: Astaamaha iyo badhannada naqshadeeyayaasha leh Mac iyo PC
Tifatiraha badhannada iyo qoraallada, astaamaha iyo calaamadaha loogu talagalay xirfadlayaasha ama ardayda, labadaba vector iyo feyl feyl leh natiijooyin aan caadi ahayn
10 nooc oo bilaash ah oo ah 8 nooc oo kala duwan oo tayo sare leh
Kuwani 10 nooc ayaa ku habboon nooc kasta oo shaqo ah maaddaama ay lacag la’aan yihiin oo ay tayo fiican u leeyihiin dhammaan qaababkaaga.